बिराट नेपाल 2013-04-20
हाम्रो समाज मा राज्य संयन्त्र हरू माथि निस्पक्ष र पारदर्शिता प्रति नागरिक को विश्वास शून्य जस्तो देखिन्छ । नियमित र कानुन सम्मत तरिका ले नागरिक ले सहज र सरल वातावरण मा न्याय पाउन सकेको वा न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने आशा भरोसा र विश्वास गर्न न् सकेको दुखद अवस्था छ । भनसुन र पहुचको प्रभाव बिना राज्यसंयन्त्रबाट काम लिनु भनेको सपनामा मात्र सम्भव छ । त्यसै कारणले नागरिकमा विकृत मानसिकताले ठाउ पाएको छ । साधरण भन्दा साधरण व्यक्तिगत वा पारिवारिक विवादमा समेत नागरिक सडकमा उत्रनुको कारण राज्य संयन्त्र प्रति अविश्वास र वितृष्णा नै हो । आफू लाई परेको मर्का राज्य संयन्त्रले गम्भीर भएर हेर्ने निष्पक्ष भएर आवश्यक कार्यबाही सहज र सरल तरिकाले कार्यान्वयन गरी दिने सस्कार र विश्वासको वातावरण भएको अवस्थामा नागरिक सडकमा उत्रने थिएनन ।
राज्य संयन्त्र ले कसरि जन विश्वास जित्न सक्छ ?एउटा उदाहरण हेरौ । १९९३ को कुरो हो । म जापान को गुन्माकेन बाट टोक्यो को ओगावा भन्ने सानो सहर मा सरेको थिए .गुन्माकेन मा हुदा काम विशेष ले मित्र बि बि थापा (अहिले गीतकार) सित मैले सात् मान अर्थात् ७० हज्जार एन सापट लिएको थिए .सो सापट रकम लाई केही समय पछि मैले साधरण खाम मा हालेर हुलाक मार्फत पठाइ दिएको थिए । २४ घण्टा क्रियासिल रहने जापानी हुलाक सेवा ले साधारणतया २४ देखि ४८ घण्टा भित्र जापानको कुनै पनि कुना बाट अर्को कुनामा चिठ्ठी पुर्याई सक्ने गर्दछ । तर मैले पठाएको ७ दिन त् के १५ दिनमा पनि न् पुगेको खबर मित्र बि बि थापाबाट आयो । यो के भयो यस्तो त् हने सक्दैन । मेरो मनमा अनेक कुरो खेल्न थाल्यो । कतै मित्रले मलाइ नै झुठो ठाने कि वा उतै कोइ साथीले खाम बेपत्ता पारी दिएकी ? अब के गर्ने भनेर मैले सहकर्मी जापानिज नागरिक सित सोधे । उनको सल्लाह बमोजिम मैले खाम खसालेको नजिकको हुलाक कार्यालय र मित्रले आफ्नो नजिकको हुलाक कार्यालयमा खाम हराएको कुरो राख्यौ । त्यसको ठिक दुई दिन पछि म कामबाट फर्कदा कोठाको ढोकामा एउटा खाम पाए । खोलेर हेरे मलाइ भेट्न टोक्योको केन्द्रीय हुलाक कार्यालयबाट दुई जना कर्मचारी आएका रहेछन् र भेट्न नसकेकोमा माफ पाउ भन्दै खाम हराएको बारेमा बुझ्न आएको थियौ भेट्न सकेनौ । तपाईँलाई असुबिधा हुन्न भने टोक्योको केन्द्रीय हुलाक कार्यालयको यो नम्बर को कोठा मा म फलानो लाई यो मिति र समय मा भेट्न वा तपाईँ लाई भेट्न कुन समय अनुकूल हुन्छ फोन मा खबर गर्न म अनुरोध गर्दछु भनेर सूचना छोडेर गएको रहेछन् ।
सहकर्मी साथी लाई त्यो कुरो बताए । त्यो समयमा पुग्न आफ्नो काम सिध्याउनु अनिवार्य थियो । लन्च समय मा समेत काम गरेर त्यो दिनको काम सिध्यायो र टोक्यो तर्फ लाग्यौ जुन रेलमा एक घण्टाको यात्रा को दुरीमा थियो । हामी ती कर्मचारी को कोठामा पुगेर आफनो परिचय दियौ । त्यस पछि ती कर्मचारी को व्यवहार देखेर मेरो आँखा रसायो । होइन यी कस्ता मानिस हुन् ?पृथ्वीमा यस्ता मानिस पनि छन् ?रहेछन् मैले आफ्नो जीवनमा कतै सुनेको र पढेको समेत थिएन । लाग्दथ्यो उनी एक ठुलो अपराधी हुन् र म न्यायाधिस हु .उनी हरेक अर्को शब्द मा असुबिधाको लागि माफ पाउ मेरो कर्मचारीबाट भएको गल्ती को लागि माफ पाउ भन्दै थिए । उनी अङ्ग्रेजी न् बोल्ने म सतप्रतिशत नीहोंगो(जापानिज भाषा )न् बुझ्ने तर त्यो अवस्था को आभास ती हुलाक का हाकिम लाई पहिले नै भएको रहेछ र साथ मा अङ्ग्रेजी बुझ्ने अर्को साथी लाई पनि त्यहाँ सँगै बोलाएका रहेछन् ।
उनले मेरो बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिए करिब आधा घण्टा को त्यो सम्बाद को बिचमा । यो खान्छस कि त्यो खान्छस कि ?उनको त्यो व्यवहारले यस्तो भाव बिभोर बनायो कि कतै मैले पैसा भएको खाम हराएको उजुरी गरेर उनीहरूलाई दुख त् दिएको छैन ? जस्तो पो लाग्न थाल्यो । मेरो बारेमा जानकारी लिसके पछि । उनले बताए कि त्यही को एक कर्मचारी ले त्यो खाम च्यातेर पैसा निकालेको रहेछ । उनलाई जेल चलान गरेर कार्यबाही सुरु भैसकेको रहेछ । उसको तर्फबाट उनी बार बार माफ माग्दै थिए । त्यसपछि उनले भने अब हामी अलि कति कानुनी प्रक्रिया को लागि कागज पत्र बनाउने छौ र तपाईँको पैसा फिर्ता गर्छौँ । आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई सहयोग गर्नु भएको मा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै फेरी अनि फेरी माफ मागे र हामीलाई तल ढोका सम्म पुर्‍याउन आए ।
त्यसको तेस्रो दिन मेरो पोस्ट बक्स मा टोक्यो हुलाक कार्यालय बाट पठाएको खाम आई पुग्यो । खोलेर हेरे । मेरो सात् मान अर्थात्( ७० हज्जार एन )सहित खाम मा लगाएको टिकेट (टिकेट बराबर को अर्को टिकेट )दुई जनाको रेल खर्च समेत पठाएको रहेछन् । अब सोच्नुस त् कसरि बढ्छ नागरिक र राज्य संयन्त्र बिच को मधुर सम्बन्ध विश्वास र सहयोगी भावना ? हामी पनि त् यसै धर्तीका मानिस हौ किन अनुसरण गर्न सक्दैनौ ? हामी आफ्नो पीडाको गुनासो गर्छु के अरूको पीडा लाई बुझ्ने कोसिस गरेका छौ ? प्रत्यक नागरिक चाहे त्यो राष्ट्र सेवक होस् वा सर्ब साधारण प्रचलित नियम कानुन अन्तर्गत स्वतन्त्र र इमान्दरिपुर्बक पारदर्शी एबम निष्पक्ष कारबाही गर्न र गराउन सहयोगी हुनु पर्दछ ।